Super Mario Sy Ny Praiminisitra Abe No Olo-Malazan’Ilay Lahatsary Dokan’ny Japana 2020 Tany Rio · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Septambra 2016 14:05 GMT
Tokyo 2020. Dikasary avy taminà lahatsary niparitaka be tamin'ny Haino aman-jery Sosialy.
Nandritra ny lanonam-pamaranana ny lalao Olaimpika 2016 tany Rio de Janeiro, ny 21 Aogositra teo, dia nasehon'i Japàna ny fahafahana handray ny lalaon'ny lohataona any Tokyo amin'ny 2020.
Nararaotin'i Japana ilay fotoana mba hampahafantarany ny ‘fahefana malefaka’ ananany, indrindra fa tamin'ny ampaham-potoana izay nandehanan'ilay sariolon'ny Nintendo atao hoe Mario taminà fantsona maitso avy any amin'ny ivon'ny tany ho any Rio. Fotoana fohy no nisehoan'i Mario tamin'ny vahoaka tany Rio talohan'ny nivadihany palitao ho Praiminisitra Japoney Abe Shinzo izay nanasa izao tontolo izao ho any amin'ny Lalao Olaimpika 2020 hatao any Tokyo :
“Abe Mario.” ity
Naneho hafaliana ireo Japoney marobe mpampiasa ny Twitter :
(Prime) Minister Abe in RIO
Nijery ny fidiran'i “Abe Mario ” tao amin'ny lanonam-pamaranana tany Rio aho, ary raha mbola variana aho dia nieritreritra ihany koa hoe “Tsy somary adala kely izany ve izy ?”
Na dia mpanao politika mamim-bahoaka any Japana aza i Shinzo Abe, taorian'ny fandreseny tamin'ny fifidianana farany teo sy ny nahazoany ny maro an'isa tao amin'ny Antenimieran-doholon'ny parlemanta misy rafitra roan'i Japàna, dia nampatahotra ny faniriany hanitsy ny Lalàm-panorenana Japoney.
Ity ihany koa no loza, tsy ho mamim-bahoaka intsony i Abe noho ny tsy fivoaran'ny toekarena na dia efa an-taonany maro aza no nanaovana ny “Abenomics.”
Araka izany, ny lazan'ilay lahatsary doka ho an'ny Lalao Olaimpika 2020 sy ny “Abe Mario” dia tsy maintsy ho vaovao tsara ho an'ny Praiminisitra.
Maro ireo mpisera amin'ny Twitter no niaky tamin'ny fampisehoana ankapobeny :
Ny zavatra tena nahagaga ahy indrindra dia ny fomba fampiasàna ireo goba hamoronana ny sary famantarana ny Tokyo 2020, ary avy eo nampiseho ny faravodilanitr'i Tokyo.
Vao avy nijery ny anjaran'i Japàna tamin'ny lanonam-pamaranana tany Rio aho, nalainy ambongadiny ny fanahin'ny kolontsaina Japoney “otaku”. Tena tafiditra avokoa ny antsipirihany kely rehetra.
Nahatonga ihany koa ireo Japoney mpisera amin'ny Twitter hanasoaso ilay kolontsaina Japoney “tsy manam-paharoa” raha ampitahaina amin'ny an'ny hafa ilay lahatsary dokan'ny 2020 tany Rio :
Iray amin'ireo toetra mampiavaka ny kolontsaina Japoney ny fiheverana ny antsipirihany madinika, matetika hatrany amin'ny bitika indrindra. Tsy misy firenena na aiza na aiza eto ambonin'ny tany ankoatran'i Japana mitandrina ny antsipirihany ( tahaka ny ataonay), indrindra fa ny zavatra izay tsy tsikaritra na hitan'ny olona akory.
Araka izany dia zavatra tokony hireharehan'ny Japoney rehetra io.
Ankoatra ny Abe Mario, dia nisy ireo atodin'ny Paska marobe sy ireo antsipirihan-javatra miafina izay nampametra-panontaniana ireo mpijery izay nanaraka akaiky :
Nanome voninahitra ny lalao Olaimpika 1964 tany Tokyo ilay lanonam-pamaranana.
Mitovy tamin'ilay famantaranandro Omega izay namidy voalohany tamin'ny 1964, tamin'ny fotoana nanohanan'ny Omega ny lalao Olaimpika voalohany tany Tokyo ilay famataranandro nanaovan'ny Praiminisitra tao anatin'ilay lahatsary doka. Manontany tena aho raha toa ka nampitoviana tamin'ny daty sy ny ora tamin'ilay famantaranandro tamin'ny 1964 ilay famantaranandro nanaovan'i Abe (ao amin'ilay sary).
Izany fandinihiana ny antsipirihany izany no zavatra iray itiavako an'i Japàna.
Inona ary no ifandraisany amin'ny zazavavy mpianatry ny sekoly ambaratonga faharoa ?
Ny sasany, na izany aza, dia nitebiteby tamin'ilay fanapahankevitra nandefasana ny sarin'ilay zazavavy mpianatra any amin'ny sekoly ambaratonga faharoa manao fanamiana (女子高生, joshikosei, aka “JK”) tao amin'ilay lahatsary doka tany Rio.
Dikasarin'ilay lahatsary dokan'ny lalao Olaimpika 2020 any Tokyo. Sary niparitaka be amin'ny haino aman-jery sosialy.
Soratan'ilay mpanao gazety Katsube Genki tao amin'ny Joshi SPA, gazety mpanatavy resaka mpiseho isan-kerinandro natokana ho an'ny tanora zazavavy :
Koa satria toa mpanao fanatanjahantena (atleta) ilay zazavavy mpianatry ny ambaratonga faharoa naseho tao anatin'ilay lahatsarin'ny PR, nahoana no izy no voalohany mpanao fanatanjahantena hany nanao ny fanamian'ny sekoly tao anatin'ilay lahatsary ? Raha ohatra ka ny tanora izay ho lasa mpanao fanatanjahantena amin'ny hoavy (hisolo tena an'i Japàna amin'ny Lalao Olaimpika 2020) no tiana haseho, nahoana no tsy nisy zazalahy nanao fanamian'ny sekoly naseho teo ?
Valian'i Katsube tamin'ny lahatsoratra tao amin'ny Joshi SPA, ny fanontaniany :
Ny antony dia satria tian'ny mpikarakara ny Tokyo 2020 hampiasaina ho toy ny sarin'ny maha-lahy na maha-vavy ( ny fanamiana ) tamin'ny fampahafantarana ny Lalao Olaimpika ho an'izao tontolo izao.
Somary manana tantara mampalahelo any Japana ny fanamian'ny mpianatra zazavavy amin'ny sekoly ambaratonga faharoa, hoy ny fanamafisan'i Katsube :
Raha ny marina, tahaka ny mariky ny fivarotantena mihaja (援助交際, enjo kosai) sy bà manara-batana efa niasa (ブルセラ, burusera) ny fanamian'ny sekoly ambaratonga faharoa anaovan'ny mpianatra zazavavy taloha dia nifono hevitra mafonja amin'ny resaka firaisana ara-nofo izany izay efa nofoanana taorian'ny nanakianan'ny Firenena Mikambana an'i Japàna ho manome alàlana ny fivarotantena ataon'ny ankizy sy fy fanondranana olona.
Ireo sasany mpaneho hevitra dia nankalaza tsotra izao ny zava-misy hoe ilay mpanao fanatanjahantena iray vao nisondrotra any Japana no naseho tamin'ilay lahatsary dokan'ny 2020 :
Dobashi Koko, 16 taona, ilay zazavavy mpianatra amin'ny ambaratonga faharoa mpanao fanatanjahantena izay nanomboka ilay lahatsary 2020.
Hifaninana amin'ny lalao Olaimpika Tokyo 2020 no tanjony. Tsy kisendrasendra ny nahatafiditra azy tao anatin'ilay lahatsary – manana nofinofy goavana ny amin'ny hoavy izy.
“Tokony Ho Lanin'ny Voninkazo Piranha Ny Praiminisitra Abe “
Tsy gaga tamin'ny ronono an-tavin'ny Praiminisitra Abe tao amin'ilay lahatsary dokan'ny Tokyo 2020 tamin'ny lanonam-pamaranana tany Rio ireo mpanao politika mpanohitra.
Niditra tamin'ny pataloha tery i Fujioka Yoshihide, Kaominista mpikambana ao amin'ny antenimieram-piadidian'i Nagano tamin'ny nitsikerany tao amin'ny Twitter ny fisehoan'i Abe .
Novonoiny haingana ny Bitsika nataony, saingy nisy nahazo talohan'izay ny dikasarin'ilay fanamarihana manafintohina :
(Dikasarin'ilay Bitsika manafintohina) : “Tokony Ho Lanin'ny Voninkazo Piranha i Abe raha vantany vao tafavoaka ilay fantsona maitso. Nandeha tsara ny zavatra rehetra hatramin'ny nahatongavana tamin'izay teboka izay.”
Kazuo Shi, filoha nasionalin'ny Antoko Kaominista Japoney dia somary namboatra ny valinteniny :
Izao no voalaza ao amin'ny lalànan'ny lalao Olaimpika, ” Fifaninana eo amin'ny samy mpanao fanatanjahantena na ekipa ny lalao Olaimpika fa tsy fifaninana amin'ny firenena.” Maro be ireo sehatra nanaitra tany Rio rehefa noporofon'ireo mpanao fanatanjahanatena tamin'ny heriny, ny hakingàny, ary ny faharetany fa tena ” fifaninana eo amin'ny samy mpanao fanatanjahantena ” ilay Lalao. Manantena aho fa izany fanahy izany no hanjaka any Tokyo amin'ny 2020.
Niteraka resaka vitsivitsy mampihomehy tahaka izao tao amin'ny Twitter ilay sarin'ireo lalao :
Mety ho hita any afovoan'i Tokyo ilay fantsona maitso nitondra nankany Rio.
ito no tena “fantson'i Abe Mario”—raha ny marina, izy io dia ilay “zavatra maitso” mifono zava-dalina eo anoloan'ny garan'i Ikebukuro.